Golaha imaamyada Kenya ee CIPK oo lagu boorriyay in ay midoobaan, kana hor tagaan xagjireynta Dhalinyarada – The Voice of Northeastern Kenya
Golaha imaamyada Kenya ee CIPK oo lagu boorriyay in ay midoobaan, kana hor tagaan xagjireynta Dhalinyarada
Madaxa maamul goboleedka Kwale ee gobolka xeebta dalka Salim Mvurya ayaa ka codsaday masuuliyiinta golaha imaamyada iyo muwacidiinta dalka ee loo yaqaanno CIPK laantooda Kwale in ay u midoobaan hogaaminta shacabka.
Mr Mvurya ayaa sheegay in hogaamiyeyaasha diinta ay yihiin dadka kaliya eek u guuleysan kara in ay midnimo ka dhex abuuraan shacabka, sidaas awgeedna iyaga qudhooda looga baahanyahay in ay hogaan qura yeeshaan.
Govenerka oo ka hadlayay munaasabad dhaqaale aruurin ah oo ka dhacay School ku yaalla deegaanka Musambueni ayaa sheegay in sidoo kale golaha imaamyada Muslimiinta laga dhowrayo in ay ka shaqeeyaan ka hor tagidda falalka xagjirnimada lagu baro dhalinyarada, xili ay dhawaan soo baxeen warar sheegaya in dhalinyaro tiradooda gaareyso 1500 oo qof oo kasoo jeeda Kwale la baray xagjirnimo.
Xog hayaha guud ee golaha imaamyada iyo muwacidiinta dalka Sheikh Mohamed Alifa ayaa isagana sheegay in ay lagama maarmaan tahay in imam kasta uu xil iska saaro dadaalka ku saabsan hagaajinta bulshada muslimiinta ah.
Gobolka xeebta ayaa lagu tilmaamaa meelaha ugu badan ee ay ka tagaan dhalinyarada Muslimiinta Kenya ee tababarrada lasoo qaata al shabab oo fadhigeedu yahay dalka Soamlia.
← Siyaasiyiin kasoo jeedda gobolka Mt Kenya oo ku hanjabay in ay isaga baxayaan xisbiga Jubilee
Booliska oo xiray askari ka tirsan Milatariga oo lagu tuhmay inuu iibinayay walxaha qarxa →